RV vs. hotely: Iza no mora kokoa amin'ny Travel Budget?
RV vs. Hotels: Iza no Mitombina Kokoa?
Diniho ny fomba fiainan'ny RV miaraka amin'ny fandaniana
Nisy fotoana izay nandehanan'ny Travel RV mora vidy ny olona aorian'ny fisotroan-dronono, saingy efa lasa lavitra ireo andro ireo. Ny fianakaviana dia nahatsikaritra ny toekarena goavana izay miditra an-tsehatra rehefa tsy mila mandray olona enina ao amin'ny trano fisakafoanana in-telo isan'andro. Fianakaviana lehibe kokoa izay mila efitra fandraisam-bahiny roa isaky ny alina no nahita ny fiaramanidin'ny RV sy ny hatsaran'ny fitsidihana ny valan-java-pirenena.
Mazava ho azy fa misy ny fiantraikany sy ny fiantraikany eo amin'ny kodiarana amin'ny RV.
Saingy maro amin'ireo mpankafy mpizahatany no maniry fotsiny ny valiny amin'ny fanontaniana hoe "aiza no vidiny kokoa, RV na trano fandraisam-bahiny?"
Ho an'ny tanjona tsotra, ny teny hoe "RV" eto dia mamaritra safidy isan-karazany: mpitaona fiara, mpitaingina, mpangalatra fiara, ary fahadimy amin'ireo.
Variables sy fiheverana
Misy fari-draharaha maromaro eo amin'ny famaritana izay mamaly ity fanontaniana ity. Ny vidin'ny solika, ohatra, dia tsy miova mihitsy. Ny vidin-tsolika dia mety ho enta-mavesatra na fifanakalozana ao anatin'ity taona ity ihany.
Loha-hevitra iray hafa: Tokony hividy na hofaina ve ianao? Fahendrena matetika ny manofa RV mandritra ny dia amin'ny faran'ny herinandro lava izay tsy mampanalavitra anao lavitra ny trano. Amin'ny fahavaratry ny fahavaratra sy ny lavo, ny mpivarotra indraindray dia manolotra fotoana voafetra. Izany dia mamela anao hanandrana RV nefa tsy mandany vola be. Tadidio fa mety handany vola be toy ny trano kely iray ny RV vaovao. Mety mila mandany $ 100,000 na mihoatra bebe kokoa ianao hividy RV vaovao, noho izany dia tsy misy dikany ny manandrana fanofana mandritra ny fotoana fohy alohan'ny handinihana ny fanoloran-tena ara-bola ananan'ny fampindramana na ny fananana feno.
Rehefa mampitaha ny vidin'ny fampisehoana RV ianao sy ny trano fandraisam-bahiny ary ny trano fisakafoanana ao amin'ny hotely, dia tadidio fa sarobidy be ny fandaniana, ary ny toe-javatra mety hibaiko amin'ny safidy no tena haingana indrindra. Raha manana fianakaviana kely ianao nefa mankafy ny fomba fiainan'ny RV, dia mety tsy hanahy ianao fa ny taham-piainanao amin'ny dia lavitra dia tsy misy na inona na inona.
Fianakaviana maro te-hiala amin'ny raharaham-pitsarana ary mankafy ny fahafahan'ny làlana dia mety hifidy lalana amin'ny hotely, na dia lafo kokoa ho azy ireo aza.
Ny fandehananareo dia manova zavatra. Tanàn-dehibe dia tsy mpinamana amin'ny RV, raha toa ka tsy afaka manolotra safidy tsara be ao amin'ny hotely izy ireo.
Amin'ny safidy tsirairay, mividy lisitr'ireo tombontsoa sy ny tsy fahampiana. Diniho hoe ahoana no ahafahan'ireo izay mifanaraka amin'ny safidinao rehefa mijery ny teti-bola. Fanontaniana manan-danja: Hahazo tombony ve ny tombontsoa amin'ny fanofana na fividianana RV noho ireo tsy fahampiana izay manapaka ny fotoananao fialantsasatra sarobidy? Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny fianakavianao dia ny fahafahanao manararaotra ny vola amin'ny RV. Mitombo koa ny tahiry amin'ny halavan'ny dia.
Ny roa amin'ireo vola miditra amin'ny dingana rehetra dia ny sakafo sy ny solika. Eritrereto ny fanantenana roa herinandro handinihina ny Tandrefana Amerikanina ho an'ny fianakaviana efatra. Ity misy ohatra iray:
Sakafo: $ 1,750 (@ $ 125 isan'andro)
Gasoline: $ 350 (@ 3,500 kilaometatra, 30 MPG, gaza 3 dolara)
Total: $ 2100
Ao amin'ny RV
Sakafo: $ 400 (@ $ 200 isan-kerinandro ho an'ny entana)
Gasoline $ 1.050 (@ 3,500 kilaometatra, 10 MPG, gaza 3 dolara)
Total: $ 1,450
Mariho fa ny tahiry amin'ny sakafo izay hanomananao ny tenanao raha mandray fitsangatsanganana RV mihoatra ny fanonerana ny vidin'ny solika.
(Mety ho sarobidy kokoa ny solika azo avy amin'ny solika.) Misy sasany RVs, toy ny Via Winnebago , manolotra orinasa miisa 15 MPG na mahery kokoa, noho izany dia samy hafa amin'ny endrika modely ireo tarehimarika ireo.
Noho izany, dia hamonjy vola amin'ny sakafo ao amin'ny RV ianao, fa raha toa ny fivarotana RV dia tokony hampiadana, ny vola tahiry dia tsy maintsy hivoaka ny trano fisakafoanana lafo. Ny fianarana dia manerana ny solaitrabe amin'io olona manan-danja io. Ny fandalinana kalitao dia mety amin'ny vola hafa mety tsy eritreretinao avy hatrany, toy ny fiantohana ny fividianana fiantohana RV na RV.
Amin'ny ankapobeny, ny tahiry amin'ny fampiasana RV momba ny hotely dia manan-danja. Saingy ny mpividy tetibola sasany dia manantena fa ny vidin'ny RV dia mety ho lafo kokoa noho ny hoe, angamba noho ny fifandraisany amin'ny "fanakanana azy". Raha toa ka manofa efitrano maherin'ny efitrano iray ho an'ny fianakavianao ianao, dia ho lehibe kokoa ny tahirinao.
Kanefa ny fianakaviana efatra izay afaka mahazo ny efitrano iray isaky ny alina dia mety amin'ny faran'ny ambany lenta.
Mifanohitra amin'ny finoana tsy misy fombafomba sy malaza, ny fiara tsy mataho-dalana amin'ny alina dia matetika tsy afaka. Manahy ny olona any ivelan'ny tontolo RV fa afaka mijanona eny amin'ny toerana rehetra tianao ianao amin'ny alina ary tsy handoa na inona na inona. Mety mitranga indraindray izany (matetika amin'ny alàlan'ny alalana mialoha) fa ny alina indrindra, dia misy saram-pihariana mba hividianana.
Ny fomba fiainan'ny RV
Ho an'ny sasany, ny mety ho tahiry dia tsy misy dikany satria ratsy ny fitetezan'ny RV. Tokony handinika ianao raha tafiditra ao amin'io sokajy io, na inona na inona fiheverana ara-bola.
Ny fomba fiainan'ny RV dia manolotra fotoana mahafinaritra izay tsy mbola niainan'ny olona maro: alina manodidina ny afo miaraka amin'ny mpiara-mianatra, mampitaha ireo fanamarihana momba ny toerana mialoha na ho avy, ary ny fifohazana amin'ny feo ataon'ny ankizy milalao ny maraina. Tsy misy ankizivavy mandondona eo am-baravarana, fikasana hanadio ny efitrano.
Ankehitriny noho ny vaovao ratsy: Tsy misy mpanompo mandondona eo am-baravarana, ny fikasana hanadio ny efitrano.
Ny vola voavonjy dia tokony hosihinana amin'ny asa tokony hatao, ary betsaka ihany koa. Tsy maintsy ividianana fivarotana. Tsy maintsy misakafo ny sakafo. Tsy maintsy tapahina ny fiara mifono vy. Amin'ny toe-javatra sasany, dia mety hiasa mafy kokoa eny an-dalana ianao raha tsy manodidina ny trano.
Ny olona sasany dia vonona ny hanao ny fahafoizan-tena ary hametraka ny asa izay mitondra tombontsoa tsara. Fa raha tsy liana amin'ny asa toy izany ianao mandritra ny andro fialan-tsasatra, dia tokony hitandrina tsara an'io lafiny amin'ny fiverenan'ny RV io ianao. Raha fintinina, raha ianao no karazana mpandeha izay tia ny toeram-pivarotana rehetra, ary mihinana amin'ny trano fisakafoanana ary mijanona ao amin'ny trano fandraisam-bahiny mahaliana, dia manasongadina ny làlana mankany an-dàlana ho anao, mieritrereta ela sy sarotra amin'ity safidy ity alohan'ny hanaovana fanoloran-tena lehibe.
Tokony hitondra fiara na tranobelona ve ianao?
Ny Torolalana ho an'ny Road Trip Atsimo
Mialatsiny amin'ny lalao Disney World
5 amin'ireo lalana mampidi-doza indrindra any Amerika
7 amin'ny toeram-piompiana tsara indrindra RV
Alao vakansy ny alikanao
Hevitra sy hafanam-po (Miara-miasa amin'ny toetr'andro amin'ny fahavaratra)
Ny Nosy Ekosezin'i Tahiti, Fantatra (ary Tiana) tahaka ny Polinezia frantsay
NYC Restaurant Review: Ny Water Club & The Crow's Nest
Fihaonan'i Montreal: Jona 2017 tsy maintsy mijery mivantana
Ireo 9 tsara indrindra amin'ny Atlanta Hotels 2018
Tours any Dublin
Tianao ny masoivoho sy ny biby ao amin'ny Tampa Busch Gardens
Ny andro fankalazana ny Andron'ny Folo any Irlandy
Tantsaha telo izay mitaky ny fiantohana ny fitsangantsanganana
Ny tsenan'ny tandrefana
Profile of Shaker Heights, Ohio
Free Summertime Fun ao Vancouver, BC
Karatra fitsidihana Vatikana sy Roma
Lohataona ny aretina sy ny fitsaboana